हाउसफूलको ब्यापार गर्दै ‘शत्रु गते’, के तोड्ला रेकर्ड ? (भिडियो) « Mazzako Online
हाउसफूलको ब्यापार गर्दै ‘शत्रु गते’, के तोड्ला रेकर्ड ? (भिडियो)
निकै तामझामको साथमा प्रर्दशनमा आएको मल्टिस्टारर चलचित्र ‘शत्रु गते’ । प्रर्दशनको दुई दिनमै बम्पर हिट हुने संकेत देखाएको यो सिनेमाले दर्शकको मन जित्नुमा सिनेमामा चल्तीका कलाकारहरु भएर मात्रै होईन, दर्शकले सिनेमाको पारिवारीका कथाबस्तुलाई मन पराएर पनि हो । सिनेमाको ब्यापारबाट निर्माण पक्ष जति दंग छ, दर्शक पनि सिनेमामा कलाकार र निर्देशकको कामबाट उत्तिकै सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
सिनेमाको प्रचार प्रसार निकै जोडतोडका साथमा त भएको थियो नै तर सिनेमा प्रर्दशनमा आएपछि ‘वर्ड अफ माउथ’ पनि सिनेमाले राम्रो पाईरहेको छ । मानिसहरु सिनेमाले मज्जा बाँडेको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा खुलेर नै लेखिईरहेका छन् ।
शुक्रबार र शनिवार सिनेमाको जम्बो टोली राजधानीका हल हलमा पुगेर दर्शकसँग बसेर सिनेमा हेर्न समेत भ्याएका छन् । दर्शकबीच सिनेमाका कलाकारहरुको क्रेज निकै राम्रो देखियो । बिशेषत: सिनेमाका हिरो पललाई दर्शकले जुरुक्क उचालेका थिए भने अन्य कलाकारहरुको कामले पनि निकै राम्रे प्रशंसा पायो । दिपकराज गिरीको फरक भुमिका तारिफयोग्य रहेको दर्शकको प्रतिक्रिया छ ।
हरिवंश आचार्य, किरण केसी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, पल शाह र आँचल शर्मा, निर्देशक प्रदिप भट्टराई लगायतले काठमाण्डौका बिभिन्न हलहरुमा दर्शकसँग साक्षात्कार गरेका थिए । प्राय सबै हलहरुमा शनिबार सिनेमाले हाउसफूलको ब्यापार गरेको छ ।
सिनेमाले शुक्रबार ७० लाख हारहारीको ग्रस कलेक्शन गरेको थियो भने शनिबार ब्यापर बढेको छ । शनिबार राजधानीको गोपि कृष्णको एकैपटकमा ६ वटा हल हाउसफूल, अस्टनारायणमा एकैपटकमा ३ वटा हाउसफूल, गुणसिनेमामा ४ वटै हल हाउसफूल भएका थिए । त्यस्तै मल्टिप्लेस र देशभरिका बिभिन्न शहरहरुमा पनि सिनेमाले हाउसफूलको ब्यापार गरेको छ ।
यो समाचार तयार पर्दा सम्म हामीलाई शनिबारको आधिकारीक रिपोर्ट भने प्राप्त भएको छैन । सिनेमाले शनिबार १ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।तर, ‘शत्रु गते’ले यसअघिका कलेक्सनका रेकर्डहरुलाई तोड्ला कि नतोड्ला भन्ने हेर्न भने बाँकी छ ।
चलचित्र ‘शत्रु गते’ले राजधानीका २१ वटा हलमा ४० पर्दा र मोफसलका ७५ वटा हलमा ८५ पर्दा पाउँदै कूल १ सय २५ बढी पर्दाबाट एक साथ ओपनिङ गरेको थियो।